भावुक हुँदै डान्सर सुशान्त खत्रीले भने, 'प्रहरीले बिना कारण थप्पड हान्यो' - यथार्थ खबर
भावुक हुँदै डान्सर सुशान्त खत्रीले भने, 'प्रहरीले बिना कारण थप्पड हान्यो'
Rojjan Raj Pandey १५ कार्तिक २०७८, सोमवार
भारतीय टिभी रियालिटी सो ‘इन्डियाज डान्सिङ सुपरस्टार’ बाट चर्चा कमाएका डान्सर सुशान्त खत्रीले आफूलाई प्रहरीले बिनाकारण झापड हानेको बताएका छन्।
सुशान्तले फेबसुक र इन्स्टाग्राममार्फत आइतबार राति ह्यालोविन पार्टीमा सहभागी भएको बेला प्रहरीले दुर्व्यवहार भएको बताएका हुन्।
सुशान्तका अनुसार उनी हिजो राति एलओडी र त्सयसपछि सेनेटमा गएका थिए। साथीहरुसँग रमाइलो गरिरहेका उनी अबेरसम्म बसे। प्रहरीले क्लब बन्द गराउन लाग्दा उनले आफूले प्रहरीसमक्ष बिल तिरेर निस्कने आग्रह गरे।
'तर त्यहाँनिर मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ के भयो भने एउटा भाइले उहाँको बिल भइसक्यो भने। तर अर्को भाइसँग मेरो बिल बाँकी थियो। अनि त्यसपछि पुलिसले मेरो काँधमा समातेर घिसारेर बाहिर लानुभयो।'
उनले साथीहरु र सिसिटिभी फुटेज प्रमाणका रुपमा रहेको दाबी गर्दै भने, 'पुलिसले यस्तरी समात्नुभयो मलाई हातमा पीडा भइरहेको थियो। त्यसपछि गालामा एक झापड हान्नु भयो। यसरी हान्नुभयो कि त्यस्तो झापड मैले जीवनमा कहिल्यै खाएको थिइनँ। कसैको अधिकार छैन यहाँ मलाई झापड हान्न।'
उनले आफूलाई प्रहरीले ज्याकेट र मास्कसमेत लगाउन नदिई हाफ सर्टमै सोह्रखुट्टे प्रहरी चौकी लगेर एक घन्टा थुनेको बताए।
देशका लागि मेहनत गरेर काम गरेको तर आज यस्तो दुर्व्यहार भोग्नुपर्दा चित्त दुखेको भन्दै भिडिओमा लाइभ आएका उनले आसुसमेत झारे।
कुनै पनि प्रहरीले आममान्छेलाई हात हाल्न नपाउने भन्दै उनले भने, 'हाम्रो सेवाको लागि खटेको प्रहरीले नै हामीलाई कुटेपछि हामी कसरी सुरक्षित हुन्छ?', उनले भनेका छन्, ‘पुलिस भनेको जनताको सेवा गर्ने मान्छे हो, त्यही मान्छेले हात हाल्ने ? यो गलत हो। हामी पुलिस भनेर सम्मान दिन्छौं, हामीलाई पनि त्यही सम्मान चाहिन्छ। सीधै झापड हान्न पाइन्न’
सुशान्तले आफूमाथि भएको दुर्व्यवहारका लागि माफी माग्दै प्रहरीबाट सम्पर्क गरिने अपेक्षा राखेको बताएका छन्।
सुशान्तले भनेका छन्, 'कल आएन भने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँछु।'setopati
अभिनेत्री रेखा थापाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को महासचिवमा उम्मेदवारी दिने निर्णय
प्रेम गीत ३ फागुन २३ गते प्रदर्शन
दोहोरी च्याम्पियन’को उपाधि प्रकाश पराजुली र मीना बुढाथोकी
भारतीय दिग्गज अभिनेता युसुफ हुसैनको कोभिड–१९ बाट निधन
साउथ फिल्म स्टार पुनीत राजकुमारको हृदयघातका कारण निधन
बलिउड अभिनेता शाहरुख खानका छोरा आर्यन खान जमानतमा रिहा
शाहरुख खानका छोरा आर्यन खानलाई नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरोले लागुऔषध मुद्दामा पक्राउ
सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर हलहरु खुल्ने
अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेपछि उनलाई पक्राउ गर्ने ढोका खुलेको छ।
सिद्धार्थ शुक्लाको ४० वर्षको उमेरमा हृदयघातका कारण निधन
रेखा जोशीको नयाँ देउडा गित सार्बजनीक
म त मर्छु कि क्या हो ओहो एप बाट हेर्न मिल्ने